“ရွှေမြန်မာ”: April 2010
ဟိုတစ်စု သည်တစ်စု ထိုင်လို့သောက်
ပြုံးလို့ ရွှင်လို့ ကုသိုလ်ပြု
ဒီနေ့သည် မြန်မာဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင်တို့ရဲ့ နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်တဲ့
ကဆုန်လပြည့်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကဆုန်လပြည့်နေ့ဟာ ဘုရားလောင်း သုမေဓာရှင်ရသေ့က
ဒီပင်္ကရာမြတ်စွာဘုရားထံမှ ဘုရားစင်စစ် ဧကန်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟု နိယတဗျာဒိတ်ကို
စံတော်မူခြင်း၊ ဘုရားလောင်း ဖွားမြင်တော်မူခြင်း၊ သစ္စာလေးပါးကို သိမြင်ပြီး
ဘုရားဖြစ်တော်မူခြင်း၊ မဟာဗောဓိ ပင်ပေါက်ခြင်းနှင့်
ဗုဒ္ဓ၀င်မှတ်တိုင်ကြီးများကို စိုက်ထူးခဲ့သော နေ့ထူးနေ့မြတ်ကြီးဆိုလည်း
မမှားပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မြန်မာတို့က ကဆုန်လပြည့်နေ့ကို ဗုဒ္ဓနေ့ဟု
သတ်မှတ်ကာ အခါတော်နေ့ကို တခမ်းတနား ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ မြို့ရွာဒေသ အသီးသီးတွေမှာ
စေတနာသဒ္ဓါတရားအလိုက် အလှူ ဒါနပွဲတွေ နောက်ပြီး
ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်တွေအပြင် ဘုရားတွေမှာ ဗုဒ္ဓပူဇနိယပွဲဆိုပြီး
ကျင်းပဆင်နွှဲလေ့ရှိကြပါတယ်။ ကဆုန်ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်ကတော့ မြန်မာတို့ရဲ့
ရှေးရိုးစဉ်လာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုရာသီပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။
မဟာသက္ကရာဇ် ၆၈ ခု (ဘီ - စီ ၆၂၃) ကဆုန်လပြည့်၊ သောကြာနေ့တွင် ဘုရားလောင်းကို
ဖွားမြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဘုရားလောင်းသည် ဖွားလျှင်ဖွားချင်းပင် မတ်တတ်ရပ်ပြီး
ခုနစ်ဖ၀ါး လှမ်းသွားပြီး ကြုံးဝါးပါတယ်။
ဘုရားလောင်းဖွားမြင်သော အချိန်မှာပင် ယသော်ဓရာမင်းသမီး၊ ညီတော် အာနန္ဒာ၊
ကာဠုဒါယီအမတ်လောင်း၊ ဆန္နအမတ်လောင်း၊ ကဏ္ဍကမြင်း၊ ရွှေအိုးကြီး လေးလုံးနှင့်အတူ
ဗောဓိပင်လည်း ပေါက်ပါတယ်။ ယင်းတို့ဟာ ဘုရားလောင်းရဲ့ ဖွားဖက်တော်ခုနစ်ဦးပဲ
မှတ်ချက်။ ။ ဘုရားလောင်းကြုံးဝါးသော စကားသည် အဘယ်စကားဖြစ်မည်နည်း။
ဘုရားလောင်းသည် မာရ်နတ်ကို အောင်မြင်ပြီးနောက် အာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကို
ဆက်လက်အားထုတ်ပါတယ်။ ညဉ့်ဦးယံလွန်တော့ ဘ၀ပေါင်းများစွာကို ပြန်ပြီး
အောက်မေ့ဆင်ခြင် သိစွမ်းနိုင်တဲ့ ပုဗ္ဗေနိဝါသဥာဏ်ကို ရတော်မူပါတယ်။
သန်းခေါင်းယံရောက်တော့ သုံးဆယ့်တစ်ဘုံလုံးမှာ ဖြစ်ပျက်နေကြကုန်သော
သတ္တ၀ါအားလုံးကို မြင်နိုင်စွမ်းတဲ့ ဒီဗ္ဗစက္ခုဥာဏ်တော်ကို ရတော်မူပြန်ပါတယ်။
မိုးသောက်ယံမှာ ကိလေသာဟူသမျှကို အကြွင်းမရှိ ပယ်နိုင်စွမ်းတဲ့ ----------
ဥာဏ်ကို ရတော်မူပါတယ်။ နေအရုဏ်တက်တာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် သဗ္ဗညုဗုဒ္ဓဘုရားအဖြစ်ကို
ရရှိတော်မူပါတော့တယ်။ အဲဒီအချိန်ကား မဟာသက္ကရာဇ် ၁၀၃ ခုနှစ်၊ ကဆုန်လပြည့်၊
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အကုန် ဖြစ်ပြီး သက်တော်မှာ ၃၅ နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ မိုးသောက်ယံမှာ ရရှိတဲ့ ဥာဏ်သည် အဘယ်ဥာဏ်ဖြစ်သနည်း။
ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်သည် မဟာသက္ကရာဇ် ၁၄၈ ခု၊ (ဘီ - စီ ၅၃၄) ကဆုန်လပြည့် ---- နေ့
ညဉ့်အရုဏ်တက်ခါနီး မိုးသောက်ယံတွင် ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပါတယ်။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား
ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတော်မူပါတယ်။ မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်စံဝင်တော်မူတဲ့အချိန်မှာ
သက်တော် ၈၀၊ ၀ါတော် ၄၅ ၀ါ ရရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုတဲ့နေ့သည် မည်သည့်နေ့ ဖြစ်သနည်း။
ကလျာဏ မိတ်ဆွေ၊ သူငယ်ချင်း သူတော်စင်အပေါင်းတို့ မှတ်ချက်များမှ
မေးခွန်းလေးတွေကို ဖြေကြားပေးစေလိုပါတယ်ရှင်။ အားလုံး လပြည့်နေ့မှ စပြီး
လိုအင်ဆန္ဒများ ပြည့်ပြည့်၀၀ ရရှိကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
သွန်းစရာ ညောင်ပင် လဲပြိုကာ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားက ဟောခဲ့တယ်။ အရာရာအားလုံးသည်းခံ၊ လူတွေအပေါ် မေတ္တာထား
ဘယ်သူကောင်းကောင်း မကောင်းကောင်း ကိုယ်ကောင်းအောင် နေထိုင်ကြပါ။ ကိုယ်ပြုသော ကံ
ကိုယ်ထံပြန်တဲ့။ လူသားတိုင်း ကိုယ်ကျင့်တရားမပျက်ဖို့ အဓိကပါတဲ့။ ဟုတ်တယ်နော်။
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: မျှဝေခြင်း, အမှတ်တရ
ကျွန်မနေတဲ့ လမ်းထဲတွင် မနက် - ည လူသူရှင်းလင်းလျက် အစဉ်အမြဲရှိနေတတ်ပါတယ်။ နေ့ခင်း နေ့လည် လူရှိ မရှိတော့ ကျွန်မလည်း သေချာမသိပါ။ မိုးလင်းမိုးချုပ်သွားနေသဖြင့် လမ်းထဲဘယ်နေရာတွင် ဘာရှိသည်ဆိုတာကိုလည်း ကောင်းကောင်း သတိမထားမိတတ်ပါဘူး။ တစ်နေ့ မနက်စောစောတွင် ကျွန်မ သင်တန်းရှိသဖြင့် စောစော တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်လာရင်း တစ်ယောက်ထဲ လျှောက်ရတဲ့ အရသာဟာ အလွန်အေးချမ်းတယ်လို့ စဉ်းစားမိတော့ လမ်းအလယ်ရောက်တော့ ရေချမ်းစင်လေးတစ်လုံးကို ကျွန်မ သတိပြုမိပါတော့တယ်။ ရေချမ်းစင်ဆောက်လုပ်ထားပုံလေးကလည်း သပ်ရပ်ပြီး အချိုးကျလှတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ရေချမ်းစင်လေးရဲ့ ကိုယ်ထည်ကို အညိုရောင်ဆေးသုတ်ထားပြီး ရေချမ်းစင်ဘေးပေါင်တွေကို အစိမ်းရောင် သုတ်ထားပါတယ်။ ရေအိုးလေးရဲ့ ဘေးပတ်လည်ကို ကြည့်မိတော့ စပါးပင်လို မြက်ရိုင်းရှည်လေးတွေ စိုက်ထားတာကို တွေ့ရခြင်းအားဖြင့် နေပူကျဲကျဲတွင် ရေငတ်လာသူများကို အလွန်တရာအေးချမ်းမှုပေးပြီး စိတ်ကို အေးမြစေမယ့် အရိပ်အရောင်လေးပဲလို့ ကျွန်မ တွေးမိရင်း လှူဒါန်းထားတဲ့ ကုသိုလ်ရှင်ကိုလည်း သာဓုခေါ်မိပါတယ်။ ဒါနဲ့ နေ့လည်ပြန်လာတော့ အလွန်ပူလောင်အိုက်စပ်တဲ့ ရာသီဥတုဖြစ်သည့်အလျောက် နေမင်းကြီးကလည်း ခေါင်းပေါ်နေရာယူလျက်ပေါ့။ ရေချမ်းစင်နားရောက်တော့ အံ့သြဖွယ်ရာ တွေ့ရပါတယ်။ ဆွမ်းဆန်စိမ်းအလှူခံတဲ့ သီလရှင်လေးများ လမ်းဘေးရေချမ်းစင်လေးပင် ဖြစ်လင့်ကစား ဖြတ်သွားရင်း သဲကန္တာရမှာ ရေတစ်ပေါက်တွေ့ရသကဲ့သို့ မျက်နှာလေးတွေ ၀င်းမှည့်စွာနဲ့ ရေအိုးစင်လေးနားတွင် တန်းစီပြီး နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် ခပ်ယူသောက်သုံးနေကြတာကို တွေ့ရတော့ ရေချမ်းစင်လေး လှူဒါန်းတဲ့သူကိုယ်စား လှိုက်လှဲဝမ်းသာစွာ ပီတိဖြစ်မိပြီး ကျွန်မတို့လမ်းလေးကိုလည်း အေးမြတဲ့လမ်းလေးအဖြစ် မြင်ယောင်မိရင်း ကျွန်မရင်ထဲမှာ နွေနေပူမှာ အလွန်အေးမြပြီး အလွန်ပင် ကြည်နူးမိပါတော့တယ်ရှင်။
နှိုးစက်နာရီတွေ အများကြီးပါ။ လက်တံကို လက်နဲ့လှည့်ပေးပြီး နှိုးစက်ကို ချိန်မလား၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်နည်းနဲ့ အချိန်ကို ရွှေ့ပြီး နှိုးစက်ချိန်မလား။ ဒီလို နှိုးစက်တွေနဲ့ မတူဘဲ ကွန်ပျူတာထဲကနေ သင်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ အတိအကျ နှိုးပေးမယ့် နာရီက ပိုပြီး ကောင်းမယ်ထင်လို့ ပြောပြလိုက်ပါတယ်နော်။ Lux Aeterna Software (www. lux-aeterna.com) က ထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ Speaking Clock Deluxe သည် ကွန်ပျူတာ desktop ပေါ်က နာရီဆိုတာထက် နှိုးစက်ကို အသားပေးထားပုံက နှစ်သက်စရာပါ။ ကျွန်တော့်ကို နှိုးဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ပေးပြီး နှိုးရမယ့် တေးက Endless Love.wav နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့လည်း အတိအကျ နှိုးပေးတာကို တွေ့ရပါတယ်။
Speaking Clock Deluxe သည် တကယ်ပဲ အံ့သြဖွယ် ရေးဆွဲထားတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဘာသာရပ် ၃၀ ကျော်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင် အသံသွင်းထားပြီး alarm အဖြစ် သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်အရွယ်အစား 3.607MB နဲ့ တန်ဖိုး ၈.၉၉ ဒေါ်လာ ဆို ပေမယ့် ရက် ၃၀ အခမဲ့ စမ်းသပ် သုံးခွင့်ပြုပေးထားပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ခေတ်မှာ ဓာတ်ပုံတွေကို စိတ်ကူးအမျိုးမျိုးနဲ့ ပုံဖော်နိုင်ကြပါတယ်။ အခု Antonio Da Cruz (www.photofiltre.com) ရေးသားထုတ်လုပ်တဲ့ PhotoFiltre Studio X Version 10.2.1 သည် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကို
ဘယ်လိုပြောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ပြည့်နေတဲ့ အံ့သြဖွယ် ဆော့ဖ်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။
PhotoFiltre Studio သည် သုံးရလွယ်ကူပြီး ကွန်ပျူတာ စသုံးသူများအတွက်ပင် သုံးနိုင်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ဆောင်နိုင်ချက်တွေလည်း အလွန်များပါတယ်။ ဓာတ်ပုံပညာရှင်များပင် အားကိုးပြုနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သင့်အတွက်
စမ်းသပ်သုံးကြည့်သင့်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်သက်လို့ဝယ်မယ်ဆိုရင်တောင် ၄၁ ဒေါ်လာတန်တယ်ို့ သုံးဖူးသူများက ထောက်ခံကြပါတယ်။
PhotoFiltre Studio သည် သင့်အတွက် ပျော်ရွှင်ဖွယ် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေးနိုင်ပြီး အပျော်တမ်းသုံးသည်ဖြစ်စေ၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဖြစ် သုံးသည်ဖြစ်စေ သင့်အတွက် စမ်းသပ်သုံးသင့်တဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲတစ်ခုဖြစ်တာကတော့ သေချာပါတယ်။
Photoshop ထက်တောင် လုပ်ကိုင်ရပိုပြီး အဆင်ပြေတယ်လို့လည်း ပြောထားသေးတယ်လေ။ သင့်အနေနဲ့ ဓာတ်ပုံပညာ မကြွယ်ဝသည့်တိုင် ပုံတစ်ပုံကို ဘယ်လိုပြောင်းချင်တယ်ဆိုတာ အလွယ်တကူလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ မသုံးတတ်လို့
အားငယ်နေသူများအတွက်လည်း တစ်ပန်းသာတဲ့အတွက် ကျေနပ်ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲ ၀ယ်မသုံးချင်သူတွေအတွက်ကတော့ ဒီဆော့ဖ်ဝဲကို ရက် ၃၀ အခမဲ့စမ်းသပ်ခွင့်ရလို့ ဓတ်ပုံပြောင်းချင်ပြင်ချင်တာတွေ ၀ါသနာပါရင် download ချ
ရေးသားသူ: yamin| အကြောင်းအရာ: ဓါတ်ပုံ, မျှဝေခြင်း
ဒီကနေ့သည် မြန်မာများရဲ့ နှစ်ဆန်းတစ်ရက်နေ့ နှစ်သစ်ကူးအခါသမယဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားမှာတော့ တော်တော်စည်ပါတယ်။ ညနေ ၃ ရက်မှာ ကျွန်မတို့ရဲ့
စေတနာရှင်အသင်းက အရင်ဆုံး မြောက်ဘက်မုခ်မှာ လူစုပြီး
အင်္ဂါထောင့်အသင်းတည်ရှိရာကိုသွားပါတယ်။ နောက် လွှတ်မယ့်ငါးတွေကို
ညောင်ရေအိုးလေးတွေထဲကို သပြေခတ်တွေနဲ့အတူထည့်ပြီး သွားလွှတ်ကြပါတယ်။ နောက်
ငှက်တွေလည်း လွှတ်ကြပေါ့။ အလွန်ပျော်ရွှင်ကြည်နူုးစရာကောင်းပါတယ်။
နောက်အရှေ့ဘက်မုခ်စောင်းတန်းမှာ ဘုရားဖူးဧည့်သည်များကို အအေးတိုက်
လှူဒါန်းကြပြန်ပါတယ်။ နောက်ပြီး အားလုံးအတွက် အမျှအတန်းဝေ ပြီး ဘုရားမှာ
အပတ်စဉ်ပြုသမျှ ကုသိုလ်တံမြက်စည်းလှည်းတာကတော့ ဒီကနေ့
ပြုလုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဘုရားဖူးဧည့်သည်များ အလွန်တရာမှ
များပြားလှတဲ့အတွက် အမှိုက်တွေပဲ လိုက်ကောက်မှရမှာဆိုတော့
ယောက်ျားလေးတွေလုပ်ဆိုပြီး ကျွန်မ ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
ပါလာတဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ ကားကလည်း တော်တော်ကျပ်ပိတ်သိပ်နေလို့
ကားပေါ်မှာ ချွေးတွေကြားထဲ စဉ်းစားမိတာတစ်ခုရှိတယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့
မကောင်းမှုလုပ်လို့ ငရဲခံနေရတဲ့သူတွေ ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေသလဲလို့
သူတို့ကိုယ်စား ကိုယ်ချင်းစာမိသလို မကောင်းမှုမလုပ်မိဖို့ ကိုယ့်ဘာသာ
ပြန်လည်သုံးသပ်မိပါတော့တယ်ရှင်။ နှစ်သစ်မှာ စိတ်ကောင်းထားပြီး
နှစ်ကူးမှာ လူတိုင်းကို ပျော်ရွှင်စေချင်သည့် စိတ်ဆန္ဒဖြစ်ပေါ်နေမိပါတယ်။
အဲဒီမှာ စဉ်းစားစရာအချက်တွေ ရှိပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ လူတွေကို ပိုပြီး
စိတ်ချမ်းသာစေခြင်းသည် ပိုက်ဆံလား ဒါမှမဟုတ် ပျော်ပျော်နေတတ်သော
မိတ်ဆွေများနှင့် ကိုယ့်ရဲ့အနီးဝန်းကျင်က လူတွေလား။
ပျော်ပျော်နေတတ်သော မိတ်ဆွေများရှိခြင်းကြောင့် ကိုယ်တိုင်ကလည်း
ပျော်ရွှင်ရကြောင်း လေ့လာမှုအသစ်တွင် တွေ့ရှိရပါတယ်။ အနေအနီးအဝေးပေါ်
မူတည်ပြီး မိတ်ဆွေများအကြား အပျော်သက်ရောက်ပုံကလည်း ကွာပါတယ်။ ဥပမာ
တစ်မိုင်ခန့်အကွာတွင် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နေလျှင် ပျော်ရွှင်မှု ၂၀
ရာခိုင်နငန်းရနိုင်ပြီး ကပ်လျက်တွင် ပျော်ပျော်နေတတ်သော
သူတစ်ယောက်ရှိလျှင် အပျော် ၃၄ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရသည်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ထိုမိတ်ဆွေများကြောင့် ရရှိလာသော ပျော်ရွှင်မှုသည်လည်း တစ်နှစ်ခန့်
တာရှည်သည်ဟု ဆိုထားကြပြန်ပါတယ်။ သင်လည်း သင့်အနီးမှ
ပျော်ရွှင်မှုပေးနိုင်သော/ပေးနေသော မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများကို အမြဲသတိရ
ပျော်ရွှင်မှုဝေမျှနေကြမယ်ဆိုရင် အားလုံးသည် ပျော်ရွှင်မှုနဲ့
အသက်ရှင်နေသူများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သင်လည်း ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှ
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ ပျော်ရွှင်မှုကို ခုချက်ချင်းပဲ
မျှဝေခံစားကြည့်ပါလား။ သင့်ရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုသည် မိတ်ဆွေများထံမှတစ်ဆင့်
မိသားစု၊ အိမ်နီးချင်း၊ အလုပ်အကိုင်အထိ ကူးစက်ပျံ့နှံ့နေမယ်လို့ ကျွန်မ
မြင်မိပါတယ်။ မယုံရင် စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်ပါ။ နိုင်ငံတကာ သုတေသီတို့က
ပျော်ရွှင်မှုသည် ကူးစက်တတ်သည်လို့ လေ့လာတွေ့ရှိထားကြပါတယ်တဲ့။ အဲ အဲဒီမှာ
ပြောစရာ ရှိလာပါလိမ့်မယ်။ ၀မ်းနည်းမှုကကော မကူးစက်တတ်ဘူးလားဆိုတဲ့
မေးခွန်းပါပဲ။ ၀မ်းနည်းမှုသည်လည်း ကူးစက်တတ်သည်ဆိုသော်လည်း
ပျော်ရွှင်မှုလောက် မဟုတ်ပေ။ ပျော်ရွှင်မှုသည် တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့်
သုံးဒီဂရီခန့်ရောက်သွားသည့်တိုင် အပျော်က သက်ရောက်တုန်းပင် ဖြစ်ပါတယ်။
သုံးဒီဂရီဆိုသည်မှာ မိတ်ဆွေ၏ မိတ်ဆွေမှတစ်ဆင့် အခြားမိတ်ဆွေတစ်ဦးထံ
ငွေပိုငွေလျှံ သိန်းရာနဲ့ချီရှိခြင်းကလည်း လူတစ်ယောက်ကို ၂
ရာခိုင်နှုန်းလောက် ပျော်နိုင်သည်ဟု ပညာရှင်တွေက ဆိုထားကြပြန်ပါသေးတယ်။
ဘယ်လောက်ပျော်ရွှင်စရာကောင်းကြောင်း မသိသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအပျော်ကျတော့
သုံးဒီဂရီမိတ်ဆွေထံမှ ရသည့် ပျော်ရွှင်မှုထက် မပိုကြောင်း သုတေသီတို့က
ပြောကြပါတယ်။ အဲဒီမှာ စကားပုံတစ်ခုကို ကျွန်မ သတိရမိပြန်ပါတယ်။
ဘာလဲဆိုတော့ သင်ရယ်လျှင် အားလုံးလိုက်ရယ်လိမ့်မယ်။ သင် ငိုလျှင်တော့
တစ်ယောက်ထဲငိုပေတော့တဲ့။ ဒီတော့ စိတ်ချမ်းသာမှုပေးတာသည်လည်း
မိတ်ဆွေများထံမှလို့ သင်ယူဆလို့ရပြီလား။ သင့်ဝန်းကျင်ကို အပျော်များနဲ့
ဖန်တီးချင်ရင်တော့ သင့်ထံမှ ပျော်ရွှင်မှုများကို မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း
သူငယ်ချင်းများကို ခုချက်ချင်းပဲ ဝေမျှပေးလိုက်ပါလို့ ပြောကြားရင်း
ပျော်ရွှင်မှုရှိသောသူသည် အောင်မြင်မှုကို အလွယ်တကူဖမ်းဆုပ်ယူနိုင်တဲ့လူသာ
ဖြစ်ပါကြောင်း သင့်အား ကျွန်မရဲ့ ပျော်ရွှင်မှုများကို
ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်။ ပျော်ရွှင်မှုများနဲ့အတူ မိတ်ဆွေများလည်း
တိုးပွားနိုင်ပါစေလို့ နှစ်သစ်မှာ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်နော်။
PDF Combine Version 1.5
ယခုအသုံးများတဲ့ ဖိုင် format တွေဟာ ဘယ်ဖိုင်တွေ အသုံးများလည်းဆိုတော့
PDF လို့ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။ အဲ အထူးသဖြင့် ကျွန်မတို့ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွေနဲ့
အီးဘုတ်တွေ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းလုပ်ကြတဲ့အခါမှာ PDF (Protable Document
Format)ကို သုံးကြတာ သတိပြုမိတယ်မဟုတ်လား။ အဲဒီ PDF ဖိုင်တွေများလာတဲ့အခါ
ဒါမှမဟုတ် PDF စာမျက်နှာတွေများလာတဲ့အခါ စုစည်းဖို့လိုလာပါတယ်။
ဒီအခက်အခဲကို Softplicity Research (www.coolutils.com) က PDF Combine
ဆော့ဖ်ဝဲကို ထုတ်လုပ်ကူညီပေးထားပါတယ်။ PDF ဖိုင်များကို ပေါင်းပေးပါတယ်။
PDF Combine က e-book များသာမက invoices, bank statements, contracts
စတဲ့ စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း ပေါင်းပေးပါတယ်။ PDF ဖိုင်
ဘယ်လောက်များပါစေ ပေါင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးကျေးဇူးကတော့ မိမိအနေနဲ့
စာအုပ်တစ်အုပ်ချင်းကို ဖွင့်လိုက်၊ ဖတ်လိုက်၊ ပိတ်လိုက် လုပ်ရန်
မလိုတော့ဘဲ အကြောင်းအရာတူတဲ့ စာအုပ်အများကြီးကို တစ်ဆက်တည်း
ဖတ်နိုင်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ စာမျက်နှာတွေကို အစဉ်အတိုင်း
ပြန်စီပေးပါသေးတယ်။ PDF Combine ဟာ ဖိုလ်ဒါအလိုက် ပြောင်းပေးခြင်းသာမက
subfolder များကိုလည်း ပေါင်းပေးပါတယ်။ E -book အတွက် Table of Contents
ကို တည်ဆောက်ပေးပြီး ပေါင်းလိုက်တဲ့ဖိုင်အမည်များကို bookmark အဖြစ်
သင်ကိုယ်တိုင်လည်း bookmark တွေ ပြုလုပ်နိုင်လို့
အသုံးပြုအလွန်လွယ်ကူပြီး ရှာဖွေရ သက်သာစေပါတယ်။
အခမဲ့စမ်းသပ်ခွင့်ပေးထားတဲ့ ဗားရှင်းမှာကိုက အပြည့်အ၀ ပေါင်းဖိုး
ပေးထားတာကိုလည်း တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုမှ မကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့
၀ယ်ချင်တယ်ဆို ၃၉.၉၀ ဒေါ်လာလောက် အကုန်အကျခံပြီး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။
မသိရင်တော့ ဇစ်ပိုမီးချစ်တစ်လုံးပေါ့ ။ဒါပေမယ့် သူရဲ့ပါဝင်တဲ့စွမ်းဆောင်မှုတွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေ ကြည့်ပါဦး။ စိတ်ဝင်စားစရာ ဗဟုသုတ ရစရာပါပဲ။ ကဲ အကြိုနေ့မှာ ဘာတင်ရမှန်းမသိလို့ ဗဟုသုတရမယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ အားလုံးအဆင်ပြေပါစေနော်။
Lighter Camera / DVR
* Ultra Mini Size
* Capture video for any situation
1. Charge battery by connecting to the computer via USB cable.
2. Press the record button to power on and begin recording.
3. Press the record button again to stop recording and power off the unit.
Dimension:21/4 x 1 1/2 x 1/2
Model: SCI-HJ-168 Price: $179.99
ဘာလိုလိုနဲ့သင်္ကြန်တောင် ကြိုပြီးပြီပေါ့။ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျရောက်ပေမယ့် အရင်လို သင်္ကြန်ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိခဲ့ပြန်ပါဘူးလေ။ နောက်ရက်တွေလည်း ဒီလိုနဲ့ပြီးသွားမယ်ထင်ပါရဲ့။
ဘာလိုလိုနဲ့ မနက်ဖြန် သင်္ကြန်ကြပြီနော်....
ရွက်ဟောင်းကြွေ မြေမှာ ခပြန်တော့
ပွင့်သိင်္ဂီပိတောက်ပန်း၊ နှစ်ဆန်း၍ ဖူးတံသွယ်
နွေအ၀င် သင်္ကြန်ပွဲကို နွှဲကြရပ်တိုင်း.......
တန်ခူးလဟာ မြန်မာလများရဲ့ ပထမလဖြစ်ပြီး မတ်လနှင့် ဧပြီလမှာ ကျရောက်ပါတယ်။
မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ နှစ်ဟောင်းမှ နှစ်သစ်ကူး အထိမ်းအမှတ်အဖြစ်
သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ် တန်ခူးလမှာ ကျင်းပလေ့ရှိပါတယ်။
နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင် ရေပက်ကစားသည့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့သည်
တကောင်းခေတ်ကပင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ပုဂံခေတ်တွင်
ရေသည် အေးမြကြည်လင်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောခြင်းနှင့်
ရေကိုသား၍အကြားမထင်ဘဲ ဆက်စပ်နေခြင်းဟူသော နိမိတ်သုံးပါးကို ဆောင်ပါတယ်။
ဒီနိမိတ်သုံးပါးအရ နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အကြေးများကို
ဆေးကြောသန့်စင်တဲ့သဘောပေါ့ နောက်ပြီး မြန်မာလူမျိုးအပေါင်းတို့ရဲ့
စိတ်ဓာတ်တွေကို နှစ်သစ်ကူးရေစင်ကဲ့သို့ အေးမြကြည်လင်စေတဲ့အပြင် အားလုံး
စည်းစည်းလုံးလုံးချစ်ချစ်ခင်ခင် နေထိုင်ဆက်ဆံကြရန်ဆိုတဲ့ မွန်မြတ်တဲ့
ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ ဒီသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ကျင်းပကြခြင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာတို့ရဲ့ နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အရ
မွန်မြတ်သန့်စင်တဲ့ ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုပါ ယှဉ်တွဲပြီး ဆင်နွှဲတဲ့
အစဉ်အလာကောင်းတွေကိုလည်း ဖန်တီးလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို
ခြေဆုပ်လက်နယ်ပြုပေးခြင်း စတဲ့ ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအပြင် နောက်ပြီ
သက်ကြီးပူဇော်ပွဲဆိုပြီး လမ်းတိုင်းလမ်းတိုင်းမှာ ပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်။
မြန်မာတွေရဲ့ ချစ်စရာဓလေ့စရိုက်များဟာ ပြောပြရင်တောင်
မကုန်ဆုံးနိုင်ပါဘူးလေ။ ဒီတော့ ယမင်း ပြောချင်တာက ကိုယ့်ရဲ့ဓလေ့စရိုက်၊
ယဉ်ကျေးမှုကို ထိန်းသိမ်းပြီး မဟာသင်္ကြန်ကို အားလုံးအတူလက်တွဲပြီး
ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါစို့လို့ ပြောလိုက်ပါရစေရှင်။နှစ်သစ်မှာ အောင်မြင်ခြင်း
များစွာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မအထင်ကတော့ ပြီးမယ် မထင်ဘူး
ဘာလို့လဲဆိုတော့ အတိတ်ဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိတယ်လေနော်
တမ်းတဖို့မှ မဟုတ်တာ၊ အနာဂတ်လဲဒီလိုပဲ စိတ်ကူးယဉ်နေရုံနဲ့
ဘာမှမဖြစ်လာဘူးလေ၊ အဓိက ကတော့ ယခုလက်ရှိအချိန်ဟာ
အရေးကြီးဆုံးပဲလေ ဒီတော့ ဘာပဲလုပ်လုပ် အမှားအမှန် ခွဲခြားသိမြင်ပြီး
အသိတရားလေး ကိုယ်မှာကပ်ပြီး တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ အောင်မြင်တိုးတက်မှု
ရှိဖို့ လိုအပ်နေတယ်လို့ ကျွန်မ သဘောပေါက်လိုက်မိပြီ သူငယ်ချင်းတို့ရယ်.....
နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးခါနိးကာလ၊ နှစ်ဟောင်းကို စွန့်ခွာပြီး နှစ်သစ်မှာ
ခြေမချခင် လမ်းဆုံမှာ ခြေစုံရပ်ပြီး ဆင်ခြင်သုံးသပ်ရပါမယ်။ နှစ်ဟောင်းကနေ
နှစ်သစ်ကို ကူးပြောင်းခွင့်ရတာဟာ နှစ်ဟောင်းမှာ ငါ မသေခဲ့လို့ပဲ၊ နှစ်ဟောင်းမှာ
မသေခဲ့ပေမဲ့ နှစ်သစ်ကိုရောက်တာနဲ့ ငါ့အသက်တစ်နှစ်ကြီးလာပြီ၊ သေဖို့ တစ်နှစ်
နှစ်သစ်ရဲ့ ရက်စွဲတစ်ခုခုမှာ ငါသေချင်သေသွားနိုင်တယ်။ နှစ်ဟောင်းမှာ
လွန်မြောက်ခဲ့ပေမဲ့ နှစ်သစ်မှာ လွန်မြောက်ချင်မှ လွန်မြောက်မယ်။ နှစ်ဟောင်းမှာ
ငါဘာတွေ လုပ်ခဲ့လဲ။ ငါ့အတွက် ဘာအကျိုးတွေ ခံစားရလဲ။ စဉ်းစားဖို့ လိုလာပြီနော်။
ပြီးတော့ နှစ်သစ်မှာရော အချိန်တွေ ဖြုန်းမှာလား။
အချိန်တွေ သုံးမှာလား။ ကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်၊ ကိုယ်လုပ်သင့်တဲ့ အလုပ်ဆိုတာ
လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ သေပြီးရင် ဘာမှ လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့ပါဘူး။ ခုလို
အချိန်ကာလမှာ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ သေခြင်းတရားကိုလည်း
ဒါကြောင့် သင်တို့အားလုံးကော မသေခင် ဘာလုပ်ကြမလဲ ဟင်..........................
သင်္ကြန်နဲ့ ပိတောက် ခွဲလို့မရဘူး တဲ့.....။ တစ်နှစ်ကုန်လို့ နှစ်သစ်ကို
ကူးတော့မယ်...။ ရှေးလူကြီးတွေ ပြောစကားရှိတယ်.. နှစ်ဟောင်းက အညစ်အကြေးကို
နှစ်သစ်မပါအောင် သင်္ကြန်ရေနဲ့ ဆေးရတယ်တဲ့...။ သင်္ကြန်ရေနဲ့ဆေးတိုင်း
စိတ်အညစ်အကြေးတွေ ကင်းစင်ကုန်ရင် ကောင်းတာပေါ့နော်...။ ဒါပေမဲ့ ရေနဲ့ဆေးလို့
မပျက်တဲ့ စိတ်အညစ်အကြေးတွေကို လူတိုင်းနီးပါး လုပ်နေကြတာ သိကြားမင်းကြီး
သိစေချင်ပါတယ်...။ ဒီနှစ် သိကြားမင်းက ဘီလူးစီးလာမှာတဲ့.... သတိထားကြနော်....
လူအညစ်အကြေးတွေ....ဟဲဟဲ...။ သြော်..... ဘာလိုလိုနဲ့
ဘာမှဖြစ်မလာသေးဘူးပေါ့နော်.....။ ခုထိ ကြိုးစားဆဲပေါ့......။ မိတ်ဆွေတို့ကော
နှစ်သစ်ရောက်ခါနီးပြီနော်။ နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးခံနီးမှာ ပြင်ဆင်စရာ
ရှိ်တာတွေကို ကြိုတင်ပြင်ဆင် သင့်ပြီလို့ ကျွန်မ ယူဆမိပါတယ်။ ဒါဟာ ဘာတွေကို
ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ မိတ်ဆွေတို့ သိမယ်လို့ ကျွန်မ ယူဆမိပါတယ်......။ အားလုံး
နှစ်သစ်မှာ အချစ်သစ်နဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးနိုင်ကြပါစေလို့ ကျွန်မ
ဆုတောင်းလိုက်မိပါတယ်။ အားလုံးပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပြီး နှစ်သစ်မှာ
တန်ခူးလသည် မြန်မာများရဲ့ ပထမလဖြစ်ပြီး မတ်လနှင့် ဧပြီလတွင်
ကျရောက်ပါတယ်။ မြန်မာလူမျိုးတို့ရဲ့ နှစ်ဟောင်းမှ
နှစ်သစ်ကူးအထိမ်းအမှတ်ပွဲတော်သည် သင်္ကြန်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို
နှစ်စဉ် တန်ခူးလတွင် ကျင်းပလေ့ရှိသည်။ နှစ်သစ်ကူးသင်္ကြန်ပွဲတော်တွင်
ရေပက်ကစားသည့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့သည် တကောင်းခေတ်ကပင် စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး
ပုဂံခေတ်မှာ ပိုမိုထင်ရှားလာတယ်လို့ ဆိုစမှတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။
ရေသည် အေးမြကြည်လင်ခြင်း၊ အညစ်အကြေးကို ဆေးကြောခြင်းနှင့် ရေကိုသား၍
အကြားမထင်ဘဲ ဆက်စပ်နေခြင်းဟူသော နိမိတ်သုံးပါးကို ဆောင်ပါတယ်။
ထိုနိမိတ်သုံးပါးအရ နှစ်ဟောင်းမှ အညစ်အကြေးများကို
ဆေးကြောသန့်စင်သည့်သဘော၊ ပြည်သူအပေါင်းတို့၏ စိတ်ဓာတ်များကို
နှစ်သစ်ကူးရေစင်ကဲ့သို့ အေးမြကြည်လင်စေသည့်အပြင် ပြည်သူအချင်းချင်း
ရေကိုသား၍ အကြားမထင်ကဲ့သို့ စည်းစည်းလုံးလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေထိုင်
ဆက်ဆံကြရန်ဟူသော မွန်မြတ်သည့်ရည်ရွယ်ချက်များဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို
မြန်မာတို့သည် နှစ်သစ်ကူး သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို ဗုဒ္ဓဘာသာတရားတော်အရ
မွန်မြတ်သန့်စင်သော ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကိုပ ယှဉ်တွဲကာ
ဆင်နွှဲသည့်အစဉ်အလာကောင်းများကိုလည်း ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ ချစ်စရာ
မြန်မာနှစ်ကူး အတာသင်္ကြန်မှာ စိတ်ရင်းများနဲ့
မနာလိုကင်း၊ ၀န်တိုရှင်း၊ လက်ငင်းချမ်းသာမည်...
တိပိဋကဓရ ဖြစ်ရတဲ့အာနိသင်၊ ဒီကိုယ်တော်
ဖတ်ဖတ်မောပေါ့ကွယ့် ပြောမပြချင်။ ကိုယ့်ကျောင်းနှင့် ကိုယ့်ရပ်တွင်
နေချင်လျှက် မနေရ။ အပူအအေး ယှက်ထွေးကာဒဏ်ခံလို့ စုန်အဆန်
မြန်းရတဲ့ခရီးမှာကွယ့် ကြီးတဲ့ဒုက္ခ။ မငြင်းသာတဲ့ မဆန်သာ နိုင်ငံတော်
သာသနာရေးပေမို့ကွယ် ပြေးမလွတ်ပါ၊ သူတကာချမ်းသာလို့ ထင်မြင်ကြ။ သို့ကတဲ့...
စိတ်ထဲမှာ သံဝေယူလို့၊ ကံမွေဟူ ဤအဖြစ်ကိုကွယ် နှစ်လို့ခံရ။
"ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ်လုပ်၊ ကိုယ်လုပ်တာ
ကိုယ်ရလိမ့်မယ်။ ထိမှု၊ သိမှု ထိုနှစ်ခု သတိ ကြပ်ကြပ်ပြု။ မရှိတာထက် မသိတာ
ခက်တယ်၊ မသိတာထက် မသိချင်တာ ပိုခက်တယ်၊ မသိလျှင် သိအောင်လုပ်ပါ။ မသိဘဲနဲ့
လက်ဆော့လျှင် ဆင်းရဲတတ်သည်၊ မသိဘဲနဲ့ ပါးစပ်ဆော့လျှင် ဆင်းရဲတတ်သည်၊
မသိဘဲနဲ့ စိတ်ဆော့လျှင် ဆင်းရဲတတ်သည်၊ မဆင်းရဲချင်လျှင် ငြိမ်ငြိမ်နေပြီး
သိအောင်ကြိုးစား။ အရိယာတွေဖြစ်ဖို့ အများကြီး ကျန်သေးတယ်။"
လူ့ဘုံထုံးစံ ကဲ့ရဲ့ဒဏ်ဖြင့် ရန်မာန်ပိတ်သဲ ခရီးခဲ၌
စိတ်ဇွဲသန်သန် နောက်မပြန်ဘဲ ရဲမာန်ရဲသွေး ရဲစိတ်မွေးလျက် ရဲသွေးနီနီ
စီရရီဖြင့် ဦးတည်မပျက် ရှေ့သို့ဆက်လော့။
အများအကျိုး၊ ရွက်သယ်ပိုးက၊ ခနိုးခနဲ့၊
ဆိုကဲ့ရဲ့လည်း၊ မရွဲ့မစောင်း၊ မှန်လမ်းကြောင်းကို၊ စိတ်ကောင်းနှင့်ယှဉ်၊
စိုက်မရှုနဲ့၊ ထိန်းမရှုနဲ့၊ လုပ်မရှုနဲ့၊ ချုပ်မရှုနဲ့၊ ၂။ ဖြစ်အောင်လည်း
မလုပ်နဲ့၊ ပျက်အောင်လည်း မလုပ်နဲ့၊ ဖြစ်တိုင်း ပျက်တိုင်းလည်း မမေ့နဲ့
သိနေရမယ်။ ၃။ ဖြစ်အောင်လုပ်ရင် လောဘ၊ ပျက်အောင်လုပ်ရင် ဒေါသ၊ ဖြစ်တိုင်း
ပျက်တိုင်း မသိရင် မောဟ
ဖားအောက်တောရ ဆရာတော် ဘုရားကြီး
လူကြောင့် လူကောင်းဖြစ်သည် မဟုတ်သလို လူကြောင့်
လူမိုက်ဖြစ်သည်လည်း မဟုတ်ပေ။ ကိလေသာ တရားဆိုးတို့ကို နှိပ်ကွပ်
ဆုံးမနိုင်ခြင်းကြောင့် လူကောင်းအဖြစ် မြင်ရခြင်းသာဖြစ်ပြီး ကိလေသာ
တရားဆိုးတို့ကို မနှိပ်ကွပ် မဆုံးမနိုင်ခြင်းကြောင့် လူမိုက်အဖြစ်
ငါတို့ ဖြစ်ရ၊ ဤလောက၀ယ်၊ ဘ၀သမိုင်း၊ မရိုင်းစေရန်၊
စိတ်မာန်မချ၊ မာနမပါ၊ ဒို့ စွမ်းရာဖြင့်၊ ဒို့ သာသနာ၊ ဒို့ ပြည့်ရွာကို၊
ဘယ်မှာနေနေပါကွယ်၊ နေတဲ့နေရာ ကိုယ့်အိမ်လို့မှတ်နေ၊
ဘာလုပ်လုပ် ကိုယ့်ပစ္စည်း ကိုယ့်အလုပ်ပဲ မှတ်ပေါ့၊ ဒါဆို ပြီးရောပေါ့။
အသိနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ပြည့်စုံပြီး ကျေနပ်နေကြတာက
"ဓမ္မပီတိ"၊ အသိနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား ကင်းမဲ့ပြီး ကျေနပ်နေကြတာက "အဓမ္မပီတိ"
အရှင်ဝါသေဋ္ဌာ ဘိဝံသ (ကျောက်တလုံး ဆရာတော်)
ရွှေစစ်, မစစ်ကို ငရဲမီးနှင့် မှတ်ကျောက် တင်ရသည်၊
သူတော်ကောင်း ဟုတ်, မဟုတ်ကို လောကဓံနှင့် မှတ်ကျောက် တင်ရသည်
"ဘဝတစ်ခုရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်ဟာ ဘဝနေဝင်ချိန်
(သေဆုံးခါနီး)ပဲလို့ လူတိုင်း သိနေပေမယ့် အမှန်တကယ်တော့ ယခု သင်စာဖတ်နေတဲ့
ဖြစ်ဆဲခဏ အချိန်လေးသာ သင့်ဘဝရဲ့ အရေးကြီးဆုံး အချိန်ဖြစ်ပါတယ်..."
လှုပ်ရှားရမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘ၀ဟာ သူများပါးစပ်မှာ လမ်းဆုံးသွားမယ်။
အချိန်တိုင်း တွေးနေရင်း ဘ၀ပြောင်းနေသည်။
ဗုဒ္ဓ၏ တရားဓမ္မများကို နာယူပြီးတိုင်း အကျယ်အားဖြင့်
သူတစ်ပါးကို ပြောပြခြင်း၊ ကိုယ်တိုင်ရွတ်ဖတ်ခြင်း၊ စိတ်ဖြင့်
ကြံစည်သုံးသပ်ခြင်း၊ တရားတော်လာ သဘာဝတို့ကို ရှုမှတ်ခြင်း၊ ပညာရှိတို့ထံ
မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ယုံမှားမှုကို ပယ်ဖျောက်ခြင်းတို့အား တရားနာယူပြီးတိုင်း
အရှင်ဆေကိန္ဒ (ဓမ္မဒူတ ဆရာတော်)
ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာ အချိန်တိုင်း နေရာတိုင်းမှာ
ရှိတယ်၊ ကုသိုလ်မှန်သမျှကို သတိက ပိုင်တယ်၊ သတိကို သူတော်ကောင်းက ပိုင်တယ်။
လွတ်ရာလမ်းကိုရှာနေ၊ လည်ရာလမ်းကို မလျှောက်နဲ့
သံသရာမှာ ဆင်းရဲရှည်ရှည်နဲ့ တွေ့မယ်။ လမ်းမှန်ညွှန်ပြသည့် တရားတွေ၊
ဓမ္မစာပေတွေ များများနာယူ၊ များများဖတ်ပါ။ ဒါမှ အသိဥာဏ်တွေ ရင့်လာ ဘ၀ချမ်းသာ
နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ ဧကန်မုချ ရကြမည်။
ပညာမဲ့သည် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို ကာမဂုဏ်အတွက် အသုံးချ၍
အပယ်သို့ သွားသည်၊ ပညာရှိသည် မိမိခန္ဓာကိုယ်ကို တရားရဖို့အတွက် အသုံးချ၍
သူရဲကောင်းဆိုတာ ကိလေသာဖြစ်မယ့် ကိစ္စ၊ အကုသိုလ်
ဖြစ်မယ့် ကိစ္စတွေမှာ တွန့်ဆုတ်တဲ့သူ ဖြစ်ရပါမယ်။ ကိလေသာစိတ် မဖြစ်ရဲ၊
ဟောဒီ ခုရောက်ရှိနေတဲ့ဘ၀လေးဟာ တကယ်ဆိုတော့
လမ်းဆုံလေး တစ်ခုပဲ၊ လမ်းဆုံဆိုတာ ဘယ်အရပ်ကိုပဲသွားချင်သွားချင်
သွားလို့ရတဲ့နေရာပဲ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီလမ်းဆုံမှာ လမ်းမှားတွေလည်း ရှိနေတယ်၊
လမ်းမှန်ကလည်း အတိအကျရှိနေပြန်ရော၊ ဒီတော့ လမ်းမှန်ကိုသာ
တည့်တည့်လျှောက်ပါ၊ လမ်းမသိရင် လမ်းဆုံမှာ မေးစရာလူတွေရှိတယ်၊
ဗုဒ္ဓစာပေတွေရှိတယ်၊ သိကြားတတ်မြောက် လိမ်မာသူတွေရှိတယ်၊ ဖတ်ပါ၊ မေးပါ၊
လိုရာခရီးကို လွယ်ကူစွာ ရောက်ပါလိမ့်မည်... ဘုန်းဘုန်းဦးသာဓိန
သူတစ်ပါး ကောင်းတာ မကောင်းတာကို ဝေဖန်နေရမယ့်အချိန်
မဟုတ်တော့ပါဘူး၊ ကိုယ်ကောင်းအောင်ပဲ နေရမယ့်အချိန် ဖြစ်နေပါပြီ၊
ဘာဖြစ်လို့လည်းဆိုတော့ သေဖို့က တဖြည်းဖြည်း နီးလာပြီလေ။
လောကကြီး ပျက်နေပြီတဲ့၊ ရမ်းမပြောနဲ့…
အမြဲမပြတ် ကိလေသာမီး တညီးညီး တောက်လောင်နေပါလျက်
အဘယ်ကြောင့် သင်တို့ ပျော်မြူးရယ်ရွှင် နေဘိသနည်း၊ အဘယ်ကြောင့်
"ချစ်ကြည်ရင်းနှီးစွာ နေထိုင်ခြင်းသည် မေတ္တာတရားကို
အလင်းမြှင့်ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။ ဗြဟ္မစိုရ်လက်ဖြင့် ထုဆစ်လိုက်သောအခါ
ကမ္ဘာမြေ၏ နေ့ရက်များသည် မြတ်နိုးမှုဖြင့် ရုပ်လုံးကြွလာခဲ့၏။ တစ်ခါတစ်ရံ၌မူ
မျှဝေစာနာခြင်းဖြင့် လေးလံရ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ၌မူ မျှဝေဂုဏ်ယူခြင်းဖြင့်
ပေါ့ပါးရ၏။ တစ်ခါတစ်ရံ၌မူ ဥပေက္ခာဖြင့် ရင့်ကျက်ရ၏။ ထိုသို့ဖြင့်ပင်
လောကသားတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်ဆောင်သင့်တဲ့
၀တ်နှစ်မျိုး ရှိပါတယ်။ တစ်မျိုးက လောက၀တ်ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်မျိုးက
ဓမ္မ၀တ်ပါ။ လောက၀တ်ဆိုတာ လောကကြောင်းအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိဘနဲ့ သားသမီး
ပြုကျင့်ရမယ့် ၀တ်များ၊ ဆရာနဲ့တပည့်၊ လင်နဲ့မယား၊ မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း
သူငယ်ချင်းများ အချင်းချင်း ကျင့်ရမယ့် ၀တ်များ စတာတွေကို ဆိုပါတယ်။
ဓမ္မ၀တ်ဆိုတာ ဘာသာတရားက သွန်သင်ဆုံးမ သတ်မှတ် ပေးထားတဲ့ ငါးပါးသီလကို
လုံအောင်ထိန်းမှု၊ ရတနာသုံးပါးကို ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်မှု၊ သီလ သမာဓိ ပညာ
ပြည့်စုံအောင် အားထုတ်မှု စတာတွေပါ။ ဒီတော့ကာ လောက၀တ်ကို မလိုက်နာဘဲ
ဖောက်ဖျက်ရင် ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်ရတတ်ပြီး ဓမ္မ၀တ်ကို မလိုက်နာ
မကျင့်သုံးရင် သံသရာမှာ ဆင်းရဲဒုက္ခ ရောက်တတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အတိုချုပ်
ပြောရရင် …လောက၀တ်လည်း မချွတ်စေနဲ့ ဓမ္မ၀တ်လည်း မလွတ်စေနဲ့… ဆိုတာပါပဲကွယ်…။
မကယ်နိုင်ဘူး။ မသေခင်မှာ ကောင်းကောင်းနေကြ။
လူတိုင်းမှာ အစွမ်းကိုယ်စီ ရှိကြတယ်၊ ဒါပေမယ့်
အဲဒီအစွမ်းအစတွေနဲ့ လူသားတွေအတွက် တတ်နိုင်သလောက် အကျိုးပြုပေးဖို့
စစ်မှန်တဲ့မေတ္တာ ထက်သန်တဲ့ ဆန္ဒတွေတော့ ရှိဖို့လိုအပ်တယ်
ပါရမီ ဖြည့်တယ် ဆိုတာ လက်ရှိ ကိုယ့်ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့
စိတ်စွမ်းအား ဉာဏ်စွမ်းအားတွေကို လောက ဓမ္မအတွက် အကျိုးရှိရှိ အသုံးချတာပဲ၊
အဲဒီလို အသုံးချနိုင်အောင် ကြိုးစားကြ၊ ဒါမှ လူဖြစ်ရကျိုး နပ်လိမ့်မယ်။
မအိပ်ခင် နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး စဉ်စားပါ။ ငါတစ်နေ့တာ
အလုပ်တွေထဲမှာ ကုသိုလ်၊ ဥစ္စာ၊ ပညာ တစ်ခုခု ရခဲ့သလားဆိုတာ အကယ်၍ တစ်ခုမှ
မရခဲ့ဘူးဆိုရင် ပြင်လိုက်ပါ နောက်နေ့အတွက်..
နေပူထဲကလေဟာ အေးမြတယ်လို့ ထင်ရပေမယ့် အပူငွေ့တွေ
ကိုယ်လုပ်စရာရှိတာ အစွမ်းကုန်လုပ်၊ မမျှော်နဲ့၊
မပူနဲ့။ မျှော်ရင်၊ ပူရင် ဒုက္ခရောက်မယ်။